Xisbiga Wadani oo iskaga baxay heshiis uu horay ula galay Xisbiyada Somaliland. -News and information about Somalia
Home News Xisbiga Wadani oo iskaga baxay heshiis uu horay ula galay Xisbiyada Somaliland.
Xisbiga Wadani oo iskaga baxay heshiis uu horay ula galay Xisbiyada Somaliland.
Xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ee Soomaaliland ayaa maanta waxaa uu ku dhawaaqay in uu gabi ahaanba ay ka baxeen heshiiskii xisbiyada Somaliland ay dhawaan ka gareen arimaha doorashooyinka ee lagu saxeexay madaxtooyada Somaliland.
Hogaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali Xaaji Xassan oo warbaahinta la hadley ayaa waxaa uu xukuumada iyo xisbigeeda Kulmiye ku eedeyey in heshiiskaas ay ka baxeen.
Sidoo kale Xirse ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in aysan fuli doonin qodobadii ay dhawaan kala saxiisdeen Xisbiyada Kulmiye, UCID iyo Waddani oo looga heshiiyay arimaha Doorashooyinka iyo inta ay noqonayaan Xubnaga Gudigga Doorashooyinka Somaliland.
Xisbiyadda Somaliland ayaa horey ugu heshiiyay in Gudiga doorashooyinku ay noqdaan 9 Xubnood , halka shalay Golaha Wakiiladu ay sheegeen in ay ka dhigeen 7 Xubnood.
Previous articleCiidanka Danab oo rag ku eedaysan inay la shaqeynayeen Al-Shabaab ku qabtay deegaan hoos taga Xarar-dheere
Next articleCiidan gadoodsan oo xirtay mid ka mid ah Jidadka muhiimka ah ee Garoonka Aadan Cadde